को - को भए राष्ट्रियसभामा २४ जना निर्विरोध ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»को – को भए राष्ट्रियसभामा २४ जना निर्विरोध ?
को – को भए राष्ट्रियसभामा २४ जना निर्विरोध ?
By रबि धिताल on १६ माघ २०७४, मंगलवार ०१:४२ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, माघ १६: संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ५९ सदस्यीय सभामा ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन हुुने ५६ सांसदमध्ये अब ३२ सिटमा मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
निर्विराेध हुनेहरुकाे नामावली: